नेपाल आज | मेड इन चाइना कोरोनाको ‘साम्यवादी’ डिएनए
विचार मुख्य समाचार राजनीति
मेड इन चाइना कोरोनाको ‘साम्यवादी’ डिएनए
शनिबार, १९ असार २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज (विशेष)
हामीले पढेका थियौं, कम्यूनिष्टहरु धर्म मान्दैनन रे । ठिक उस्तै चर्च, मन्दिर, मस्जीदलगायत सबै धार्मिक स्थल बन्द छन् । हामिले सुनेका थियौं, साम्यवादीहरु, सामाजिक रितिथीतीमा विश्वास गर्दैन। कोरानाको दोश्रो लहरमा मलामी जाने अवस्था थिएन, श्राद्ध गर्ने व्यवस्था पनि छैन, विगतको बर्षदेखि बिहे, ब्रन्तबन्ध, भोज भतेर गर्ने चलन हराउदै गएको छ । कारोनाको कारण गरिब मुलुकहरुलाई आफनो जनताको ज्यान बचाउनुका साथै दुइ छाकको व्यवस्थापनमा हम्मे–हम्मे परेको छ ।
चीनका प्रणेता माओले चाहेको वास्तविक साम्यवादलाई सि चिन फिङले कारोनाकोको माध्यमबाट पुरा विश्वमा स्थापित गराउन सफल भएका छन् । उनको सैन्यचरीले निर्माण गरेको मेड इन चीनको कोरोना र यसबाट उत्सर्जित सेवा र क्लिनिकल ट्रायललाई पूरा विश्वबाट खारेज गर्न सकिन्छ ? यो आफैमा अनुत्तरित प्रश्न विद्यमान छ ।
लोकतान्त्रिक दुनियाँका सबै शक्तिशाली देशहरु अहिले चीन निर्मित साम्यवादी कोरोनाबाट आ–आफ्नो समाज, सस्ंकृती, सभ्यता एवम् धार्मिक परिवेश अनुसारको लोकतान्त्रिक व्यवस्था फर्कउनमा त्राहिमाम छन् । पूंजीवाद र नव–उदारवादको दोष निकाल्न सकिन्छ। तर उसको प्रतिउत्तर चीनको आधिपत्य कदापि हुन सक्दैन ।
एक्काइसौ सताब्दिको महाव्याधी उद्भव कोभिड–१९ का कारण पुरा विश्व आक्रान्त छ । आर्थिक अवस्था लथालिङ्ग हुदै गइरहेको छ । प्रकृतिको क्षयसँगै विगत र हालका दिनमा देखिएको महाव्याधिको अन्तिम आवतरित कारोनाको उद्भव चाइनाको बुहानबाट नै भएको हो । जसले गर्दा पनि यसलाई मेड इन चाइना भन्न अतिसयोक्ति हुदैन । बुहान स्थित चाइना आर्मीको प्रयोगशालाबाट निर्मित कोरोना भाइरसको परिवार ठूलो छ ।
तर यसको बैज्ञानिक अथवा जैविक चरित्र जस्तो भएपनि यसबाट उत्सर्जित सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक समस्याको चरित्र पुर्ण रुपेण साम्यवादी कम्युनिष्ट अर्थात माओवादी डिएनएमा आधारित नै हो ।
कोरोनाका कारण आएको तबाहीले पुरै विश्वको आर्थिक बजारको गिरावटलाई चीनले अवसरको रुपमा लिएको छ । चीनको यो कुदृष्टिपुर्ण मनसायलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय ठुला देश जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इटली र स्पेन लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनि एफडीआईकोे नियमावलीलाई कडा बनाएका छन् ।
कोरोना भाइरसको असर पुरै विश्वको आर्थिक क्षेत्रमा पनि देखा परेको छ । चिनले कोरोनाको संक्रमणको कारण पुरा विश्वमा उत्पन्न भएको आर्थिक गीरावटलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न कम्पनिहरुमा लगानिमा दिएको तिब्रताले पनि चिनियाँ आर्थिक नीतिको षडयन्त्र मुलक कुचक्रको कारण नै कोरोनाको उत्पति भएको प्रष्ट भइरहेको छ ।
चीनको पिपुल्स बैंक अफ चाइना (पिबिओसि) ले भारतको सबै भन्दा ठुलो हाउजिङ्ग फÞाइनान्स कंपनी, हाउजिङ्ग डेवलपमेन्ट फÞाइनान्स कर्पोरेशन लिमिटेड (एचडिएफसी) मा करोडौं शेयर किनेर साझेदारी ०.८ प्रतिशतबाट बढाएर १.०१ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
वैश्विक अर्थव्यवस्थाको उथल–पुथलको समयमा विदेशी निवेशको आडमा भारतीय कम्पनीहरुमा आफ्नो हिस्सेदारी बढ़ाउनु चीनको विस्तारवादी सोचको ज्वलन्त उदहारण हो । कोरोनाको तबाहीबाट पुरै विश्वको आर्थिक बाजारमा छाएको गिरावटको चीन हदैसम्म अवसरको रुपमा लिन लागी परेको छ ।
विश्वस्तरिय आर्थिक तरङ्गलाई सुक्ष्म रुपमा नियाली रहेको शक्तिसाली देशहरु जर्मनी, अस्ट्रेलिया, इटली र स्पेनले पनि एफडीआईको नियमलाई शक्तिसाली बनाउन लागी परेका छन् । यूरोपीय संघले सुरक्षाको हवाला दिदै एफडीआईको शेयर कारोवारलाई चेक जाँच गर्ने नियम समेत बनाएको छ ।
अमेरिकाले चीनबाट हुने निवेशको चेक जाँच अझ कडा पेचिलो बनाएको छ । चीनले अमेरिकामा ठुलो सम्पति अधिग्रहण गरिरहेको आर्थिक जगतमा चलेको चर्चाकै बेला अमेरिकाले यस्तो नियम ल्याएको छ । आस्ट्रेलियाले पनि कोरोना भाइरस संकटको अवधीमा रणनीतिक र सामरिक सम्पत्तिहरुलाई शून्यको भाउमा बेचिने खतरालाई दृष्टिगत गर्दै विदेशी निवेशकहरुद्वारा गरिने लगानि अधिग्रहणको नियमलाई गएको मार्च महिनामै शसक्त बनाएको छ ।
भारत सरकारले पनि एफडीआईको नियममा ल्याएको परिवर्तन वस्तुतः चीनको वर्चस्ववादी रवैया माथि रोक लगाउन नै मुख्य उदेश्य हो ।
विश्वका वैज्ञानिक समुदायमा चुनौती बनेको कोरोनाको उत्पतिको अनुत्तरिरत कारण, रोगको संक्रमण वुहानबाट फैलिनु, चिनियाँ नगरिकहरुकै माध्यमवाट विश्वमा आउनु, बुहानमा गएको जाँच टोलीलाई असहयोग गर्नुलगायतका धेरै प्रश्नहरु अहिले उठिरहेका छन् । डिसेम्बर २०१९ मा चीनको वुहानबाट फैलिएको उक्त भाइरसको उद्भव केन्द्र र माध्यमका बारेमा वैज्ञानिक र अनुसन्धान गर्ने केन्द्रका आफ्नै तर्क, विश्लेषण र अनुमान छन् ।
भाइरस अर्को जीवमा (विभिन्न वन्यजन्तु वा मान्छे) प्रवेश गरेपछि त्यसले आश्रय दिने जीवको (होस्ट) शरीरमा भएका भाइरससँग अन्तरक्रिया गरी फेरिन्छ र भिन्न संरचनाको बन्छ । कतिपय अवस्थामा त नयाँ भाइरसको प्रजातिको रूपमा उद्भव हुने वैज्ञानिक तथ्य छ । त्यसै कारण भाइरसको स्रोत (उद्गम केन्द्र) मात्र थाहा पाएर हुँदैन, त्यसका बीचमा रहेका होस्टहरू पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ ।
चीनले पुरै विश्वलाई स्वस्थ्यताको साटो गÞुलाम बनाएर मानवतावादको क्षेत्रमा वर्चस्व कायम गर्ने कुरामा जोड़ दिएको तर्कहरु पनि उठि रहेका छन् । चिनीयाँ व्यापारिकरण नीति ताबूत र मुर्दाघरदेखी मास्क, हेन्डग्लोब्स, वेंटिलेटर, डाक्टर, नर्स, खाद्यान्न, पानी र परिवहनको मुल्यमा आएको तरलतालाई अधार बनाएर पुरा विश्व माँझ मसीहाको रूपमा स्थापित गर्ने योजनामा तल्लिन छ । तर यो कोशिस कतिसम्म सार्थक होला त्यो आउने समय गतिले निर्धारण गर्ने नै छ ।
अवस्था सामान्य भएपछि के पुरा विश्व संरक्षणवादी हुनसक्छ ? के विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ ) चीनको अर्काै युद्ध मैदान हुनसक्छ ?
कोविड–१९ लोकतान्त्रिक विश्वको सबै भन्दा ठुलो खुफिया असफलताको परिणाम पनि हो । किनकी चीन महामारीको नयाँ भू–राजनीतिक हतियारलाई परोपकारको रूपमा पनि पेश गरिरहेको छ । चीन पहिलादेखि नै विश्वमा सबै भन्दा ठुला सैन्य र आर्थिक शक्तिमा पुग्न होडबाजीमा लागेको पनि हो । जसलाई सि चिनफिङले झनै गतिदिएका छन् ।
के पुरै विश्व टेड्रोस माथी विश्वास र समर्थन गरेर कुनै ठुलो गल्ती गरेन ? यो जानी–जानी कि स्वास्थ्य र मानवाधिकारको क्षेत्रमा उनको राम्रो रेकर्ड थिएन । जनवरीको अन्तिममा टेड्रोस चीन गएर राष्ट्रपति शी चिनफिङसँग भेटेका थिए । त्यहाँ उनले भनेका थिए कि चीन कारोना रोगलाई नियन्त्रण लिने कार्यमा वैश्विक नयाँ मापदन्ड लागु गरिरहेको छ । उनले रोगको लक्षण र महामारी लगायत सबै जानकारी चिनले पुरा विश्व समक्ष साझा गरिरहेको भन्दै उसको सराहना समेत गरेका थिए । के टेड्रोस सीको कुनै सहमतिलाई पर्खिरहेका थिए ? के यो संक्रमण जनवरीको अन्तिममा महामारी बनेको हो ?
“यसै बीचमा कोविड १९ लगातार महामारीको विशेषता देखाइरहेको थियो, पूरै दुनियामा एकसाथ तिब्र गतीमा फैलिरहेको थियो । मात्रÞ टेड्रोस र उनको टीम स्वास्थ्य आपतकाल घोषित गर्नमा असफल रहे, उनले अन्तर्राष्ट्रीय समुदायलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन र भेदभाव न फैलाउन अनुरोध गरिरहे । यूरोपियन सेंटर फर डिजÞीजÞ प्रिवेंशन एंड कंट्रोलले सुझाव दियो कि ‘यूरोपीय यूनियनमा भाइरसको संक्रमण आशंका कम छ । जस कारण यूरोपीय देशका सीमामा कडाइ गरिने र पुरा विश्व आक्रन्त बनेको छ ।”